Indlu yeLake yanamhlanje kwiLac des Loups entle!
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguTegan
Indlu yethu yechibi yindawo yangoku, enamagumbi amabini okubuyela kumda omhle weLac des Loups kunye neGatineau Park. I-oasis yethu yabucala ephambi kolwandle (malunga ne-45 min ukusuka edolophini e-Ottawa/Gatineau) ibonelela ngendawo yokulala enesitayile enembono ye-panoramic yechibi. Qubha okanye ulobe echibini kwidokhi yethu okanye usebenzise i-kayaks yethu ukuhlola. Yonwabela ii-BBQs, uhamba ecaleni kwechibi kunye ne-waterfront bonfires. Fumana iibhutsi zakho zokuhamba, isibhakabhaka esinqumla ilizwe okanye izihlangu zekhephu ukuze ujonge iPaki. Ifakwe kwindlela efileyo enetrafikhi encinci.
Indlu yethu yechibi yanamhlanje ibanzi kwaye ikhululekile ngokuchukumisa okuninzi. Igumbi layo eliphambili linesilingi yecathedral ngelixa intabalala yeefestile ziphuphuma kwiitoni zokukhanya okuhle. Itafile enkulu yokutyela enendawo yokujonga ichibi izihlalo ezintandathu ezixhaswa sisiqithi sasekhitshini esingasetyenziselwa ukutya okanye njengendawo yokusebenza. Iveranda evaliweyo kunye nedesika ejonge echibini enesisa ibonelela ngeendlela ezongezelelekileyo zokuphumla. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye iTV enkulu yescreen esisicaba, iwifi kunye nomnxeba wasekhaya zibandakanyiwe (akukho nto incinci yokwamkela iiseli). Ukongeza kumagumbi amabini okulala, ibhedi yesofa yevelvet etofotofo ilala ezimbini kwigumbi eliphambili (kabini). Igumbi lokulala lokuqala linebhedi enkulu, elingana nenkosi kunye nesifuba esikhulu esihambelanayo sedrowa kunye nesipili. Kukho indawo yokubeka imithwalo kunye neendawo ezimbini zokulala ezakhelwe ngaphakathi zokugcina izinto zakho. Igumbi lokulala lesibini linebhedi elingana nokumkanikazi kwakunye nekhabhathi eyakhelweyo enedrowa kunye nempahla yokubeka imithwalo. Indlu yechibi inendawo yokuhlambela enkulu ebekwe kakuhle eneglasi yokuhamba-hamba kwishawari (enoxinzelelo oluhle kakhulu!). Sinikezela ngazo zonke izinto zokulala, iitawuli kunye nezinto zangasese ezisisiseko ezifana nokuhlamba umzimba, ishampu kunye ne-conditioner.
Ukuqubha, ukuloba kunye nokuhamba ngesikhephe (iiKayaks ezi-2) ziyafumaneka kwizibuko lethu elisecaleni lamanzi. Uya kufumana umgodi womlilo ecaleni komlambo ukuze ufudumale emva kokudipha kwakho (kwaye ungalibali ukugcina kwezo marshmallows!). Ngenye indlela, xhoma kwiveranda yethu yangaphambili (apho uya kufumana i-BBQ, itafile yokutyela enokuthi ihlale ezintandathu, i-ambrela kunye nezitulo ezi-2 zokhuni ezixutywayo) okanye i-lawn (apho uya kufumana enye indawo yomlilo kunye nezitulo ezi-4 ze-Adirondack).
Indlu yethu yechibi ikwindawo entle yeLac des Loups kanye kumda weGatineau Park, ethandwa ngabathandi bangaphandle abavela kulo lonke ilizwe! Kunye nokuqubha, ukuloba kunye nokuhamba ngesikhephe kwizibuko lethu labucala lamanzi, okanye ukuphumla ngenye yeendawo zethu zomlilo ngelixa upheka isaqhwithi kwi-BBQ, kukho intabalala yemisebenzi yasekhaya onayo!
Ngomlingo wamava okutyibiliza emkhenkceni omlingo oyi-3km ubude ehlathini (ukuhamba ekhephini kunye neendlela zokuhamba ziyafumaneka) ungajongi ngaphaya kwePatinage en forêt edume ngokumangalisayo (Ukutyibiliza eHlathini) engaphantsi kwe-2km ukusuka kwindlu yechibi. Yijonge kwi patinageenforet.com
Ukuba ukhetha ukutyibilika ekhephini, yiya eLac Philippe (indawo yokupaka i-P19 kunye ne-P20) ukuze ufikelele kuthungelwano olukhulu lweendlela ezimalunga neekhilomitha ezingama-22 ukusuka kwindlu yechibi.
Kukwakho uninzi lweenduli zokutyibilika ezantsi kweenduli ngaphakathi kohambo lwe-30-75min kwiindlela zonyaka wonke (onke amaxesha okuqhuba ukusuka kuqikelelo lwendlu yechibi):
I-Volage - 30min
IMont Cascades - 45min
I-Camp Fortune - 45min
IMont Ste-Marie -1 hr 15 min
Fumana ezobhutsi zokukhwela intaba kwaye ujonge iindlela zasekhaya, iLac des Loups kunye namanye amachibi amahle asekhaya okanye ungene eGatineau Park ukuze uthathe ithuba leekhilomitha ezili-183 zeendlela zokuhamba ehlotyeni.
Ilali ethandekayo yaseWakefield ingaphantsi kwe-30km kude kwaye inikezela ngeendawo zokutyela ezininzi, iivenkile kunye nemisebenzi yasehlotyeni kubandakanya ukukhwela ihashe, ipaki yamanzi, ukukhwela ibhayisekile intaba, ukutsiba bungee nokunye!
*Igrosari kunye nezinye izinto ezibalulekileyo*
Ukongeza kwivenkile yokutya ephantsi, isikhululo segesi kunye nendawo yokutyela ikhilomitha enye kuphela ezantsi kwendlela kwilali encinci yaseLac des Loups, ivenkile enkulu yokutya notywala, isikhululo segesi, ivenkile yeAce hardware, ikhemesti kunye nebhula ziphakathi kweekhilomitha ezingama-22 ilali yaseSainte-Cécile-de-Masham.
Umbuki zindwendwe ngu- Tegan
Siza kufumaneka kwi-AirBnB App ukuze sikuncede ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Sinomdla wokwazi xa ufika kwaye uhamba kwaye siya kuhlala sijonga xa sele uzinzile ukuze uqiniseke ukuba unayo yonke into oyifunayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho.
Siza kufumaneka kwi-AirBnB App ukuze sikuncede ngayo nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Sinomdla wokwazi xa ufika kwaye uhamba kwaye siya kuhlala sijonga xa sele uzinz…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lac-des-Loups